ချစ်သူသားဂန်း ကို စိတ်သဘောထား ကွဲလွဲမှုတွေ နဲ့ ဝေဖန်ပြောဆို​နေကြတဲ့ အပေါ်ပြန်လည် ရှင်းပြလာခဲ့တဲ့ “ဘေဘီမောင်” – Let Pan Daily
ချစ်သူသားဂန်း ကို စိတ်သဘောထား ကွဲလွဲမှုတွေ နဲ့ ဝေဖန်ပြောဆို​နေကြတဲ့ အပေါ်ပြန်လည် ရှင်းပြလာခဲ့တဲ့ “ဘေဘီမောင်”
မော်လ်ဒယ် သရုပ်ဆောင် ဘေဘီမောင် က အနုပညာငွေကြေးထဲကနေ မကြာခဏ ဆိုသလို အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ သူတွေကို တတ်နိုင် သ လောက် အလှူအတန်းတွေ လှူဒါန်းပေးတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘေဘီမောင်နဲ့ ချစ်သူ သားဂန်းတို့က လတ်တ လော မှာ တရားမျှတတဲ့ ဒီမီုကရေစီကို ပြန်လည် ရှင်သန်နိုင်ဖို့အတွက် အဖက်ဖက်က ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ အချိန်လေးမှာ တာဝန်သိ ပြည်သူ တစ်ယောက်အနေဖြင့် ပြည်သူတွေနဲ့အတူ တစ်သားတည်း အပြည့်အဝရပ်တည်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ရင်း အသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ အာဇာနည် သူရဲကောင်းတွေအတွက် အလှူငွေများကို ဘေဘီမောင်တို့ ချစ်သူ တွေက ကူညီလှူဒါန်းပေးတာ တွေ့ရပါတယ်။ ချစ်သူနှစ်ယောက် တိုင်းပြည်အတွက် တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ လုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ အ ချိ န်လေးမှာ ချစ်သူသားဂန်းကို သဘောထား ကွဲလွဲပြီး ဝေဖန်နေကြတဲ့အပေါ် ​ဘေဘီမောင်က အဖြစ်အမှန်တွေကို ပြန်လည်ရှင်း ပြလာ ခဲ့ ပါတယ်။ “ကျွန်မရဲ့ချစ်သူ သားဂန်းက တအားအနေအေးသူပါ ဒါမဲဲ့သူက ဆန္ဒမပါရင် ဘာတစ်ခုမှစိတ်လိုလက်ရ လုပ်တဲ့သူ မဟုတ်ပါဘူး ရှင်…..
ခုလိုမြင်ရ ကြားရတာ စိတ်တကယ့် တကယ် ထိခိုက်ပါတယ်ရှင်… ကျွန်မတို့၂ဦးလုံးက စိတ်ဆန္ဒမတူညီရင် ဘယ်ပရဟိတမှ လုပ်မယ့် သူတွေမဟုတ်ပါဘူး……အခုလို ပရဟိတတိုင်းမှာ ၂ဦး၂ဖက်သဘောတူကြည်ဖြူ ဆုံးဖြတ်ပြီး ရှေ့တက်ကြတာပါ……သူရဲ့အကောင့် တကယ်လော့ကျနေပါတယ်…. ခုလိုချိန်မှာ လိုသူရော မလိုသူရော ရူပ်ထွေးနေတဲ့အတွက် ကျွန်မအကောင့်မှာ စိတ်တူကိုယ်တူ စုံတွဲပုံ များနဲ့တကွ တတ်နိုင်တဲ့ဖက်က တိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်…..စိတ်သဘောထားမကွဲလွဲစေချင်ပါဘူးရှင်…. .သူ့ဆန္ဒမပါဝင်ပဲ အခုလိုဆန္ဒ ဖော်ထုတ်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်လို့ ချစ်သူခင်သူကြား သဘောထား မကွဲလွဲစေချင်လို့ တောင်းပန် မေတ္တာရပ်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်” ဆိုပြီး ရေးသား ထားပါတယ်။ ကဲ..ပရိသတ်ကြီးလည်း ပရဟိတအလုပ်တွေကို တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ လုပ်ကိုင်ပေးနေကြတဲ့ ဘေဘီမောင် တို့ ချစ်သူနှစ်ဦးကို ဆုမွန်ကောင်းလေးတောင်းပေး လိုက်ပါဦး။
ေမာ္လ္ဒယ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေဘဘီေမာင္ က အႏုပညာေငြေၾကးထဲကေန မၾကာခဏ ဆိုသလို အခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့ သူေတြကို တတ္ႏိုင္ သ ေလာက္ အလႉအတန္းေတြ လႉဒါန္းေပးတဲ့ အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဘဘီေမာင္နဲ႔ ခ်စ္သူ သားဂန္းတို႔က လတ္တ ေလာ မွာ တရားမွ်တတဲ့ ဒီမီုကေရစီကို ျပန္လည္ ရွင္သန္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အဖက္ဖက္က ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ အခ်ိန္ေလးမွာ တာဝန္သိ ျပည္သူ တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ တစ္သားတည္း အျပည့္အဝရပ္တည္ေပးခဲ့ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမွာပါဝင္ရင္း အသက္ေပးလိုက္ရတဲ့ အာဇာနည္ သူရဲေကာင္းေတြအတြက္ အလႉေငြမ်ားကို ေဘဘီေမာင္တို႔ ခ်စ္သူ ေတြက ကူညီလႉဒါန္းေပးတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ တိုင္းျပည္အတြက္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာကေန လုပ္ေဆာင္ေပးေနတဲ့ အ ခ်ိ န္ေလးမွာ ခ်စ္သူသားဂန္းကို သေဘာထား ကြဲလြဲၿပီး ေဝဖန္ေနၾကတဲ့အေပၚ ​ေဘဘီေမာင္က အျဖစ္အမွန္ေတြကို ျပန္လည္ရွင္း ျပလာ ခဲ့ ပါတယ္။ “ကြၽန္မရဲ႕ခ်စ္သူ သားဂန္းက တအားအေနေအးသူပါ ဒါမဲဲ့သူက ဆႏၵမပါရင္ ဘာတစ္ခုမွစိတ္လိုလက္ရ လုပ္တဲ့သူ မဟုတ္ပါဘူး ရွင္…..
ခုလိုျမင္ရ ၾကားရတာ စိတ္တကယ့္ တကယ္ ထိခိုက္ပါတယ္ရွင္… ကြၽန္မတို႔၂ဦးလုံးက စိတ္ဆႏၵမတူညီရင္ ဘယ္ပရဟိတမွ လုပ္မယ့္ သူေတြမဟုတ္ပါဘူး……အခုလို ပရဟိတတိုင္းမွာ ၂ဦး၂ဖက္သေဘာတူၾကည္ျဖဴ ဆုံးျဖတ္ၿပီး ေရွ႕တက္ၾကတာပါ……သူရဲ႕အေကာင့္ တကယ္ေလာ့က်ေနပါတယ္…. ခုလိုခ်ိန္မွာ လိုသူေရာ မလိုသူေရာ ႐ူပ္ေထြးေနတဲ့အတြက္ ကြၽန္မအေကာင့္မွာ စိတ္တူကိုယ္တူ စုံတြဲပုံ မ်ားနဲ႔တကြ တတ္ႏိုင္တဲ့ဖက္က တိုက္ပြဲဝင္ေနပါတယ္…..စိတ္သေဘာထားမကြဲလြဲေစခ်င္ပါဘူးရွင္…. .သူ႔ဆႏၵမပါဝင္ပဲ အခုလိုဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ဆိုတာ ဘယ္လိုမွမျဖစ္ႏိုင္လို႔ ခ်စ္သူခင္သူၾကား သေဘာထား မကြဲလြဲေစခ်င္လို႔ ေတာင္းပန္ ေမတၱာရပ္ခံျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဆိုၿပီး ေရးသား ထားပါတယ္။ ကဲ..ပရိသတ္ႀကီးလည္း ပရဟိတအလုပ္ေတြကို တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္ကေန လုပ္ကိုင္ေပးေနၾကတဲ့ ေဘဘီေမာင္ တို႔ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးကို ဆုမြန္ေကာင္းေလးေတာင္းေပး လိုက္ပါဦး။
ပုရိသတွေ ရင်ခုန် သွားစေမယ့် အမိုက်စား ပို့စ်လေး ပေးနေ တဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်း